नायक पल शाह प्रहरीकोमा आत्मसमर्पण गर्दै।जाने भए जेल? |
February 24, 2022 adminLeaveaComment on नायक पल शाह प्रहरीकोमा आत्मसमर्पण गर्दै।जाने भए जेल?
हिजो मात्रै १७ वर्षीया गायिकाले नायक पल शाहले आफूमाथि क-रणी ग-रेको दाबीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा क-रणी वि’रुद्धको जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन। गायिका तर्फबाट परिवारले दिएको उजुरीमा शाहले माया-प्रेमको जालमा फसाएर क-रणी ग-रेको आरोप लगाएकी छन्।
क-रणीसम्बन्धी कसूरमा कि-टानी जाहेरी दर्ता भएसँगै १७ वर्षीया गायिकाले मेडिकल चेकअप पनि गराइसकेकी छिन् । क-रणी विरुद्धको जा’हेरी दर्ता भएसँगै प्रहरीले अभिनेता पल शाहमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले शाहविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको र आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। ज-बरज-स्ति क-रणी भएको पुष्टि भए अबको केही घण्टा भित्रै नायक शाह पक्राउ पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
तनहुँ प्रहरीका अनुसार शाहले पोखरा, तनहुँ, चितवन लगायतका स्थानमा बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। गायिकाले करिब ३ महिनायता गीत-संगीतमा ध्यान दिन नसकेको र यसबारे बुझ्दा घटनाका बारेमा जानकारी पाएको जाहेरीमा उल्लेख छ। पीडित गायिका र शाहबीच एक गीतको म्युजिक भिडिओ सुटिङमा भेट भएको र त्यही बेला उनीहरूले फेसबुक र फोन नम्बर आदान प्रदान गरेका थिए।
त्यसपछि उनीहरूको निरन्तर भेटघाट र संवाद हुन थालेको जाहेरीमा उल्लेख छ। शाहले देखावटी माया-प्रेम गरेको बहाना गरी भिडिओ सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बढाउँदै लगी धेरै नै रेखदेख, हेरचाह गरेजस्तो गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ। यस्तै म्युजिक भिडिओ सुटिङ गर्न पोखरा, चितवन, बाग्लुङ, तनहुँ समेतका स्थानमा काम सकेर होटलमा बास बस्दा पटक-पटक ब-ला-त्कारको प्रयास गरेको उल्लेख छ।
बागलुङको गलकोट महोत्सवमा २०७७ चैत ३१ गते शाहसहित दुर्गेश थापा, योगेस काजी, सम्राट चौलागाईं, कृष्ण जोशी, समेतका कलाकारहरूसँग एउटै गाडीमा जाँदा पीडित गायिका र शाह एउटै सिटमा बसेको र यात्राका क्रममा शाहले बा-लयौ-न दु-र्व्य-वहार ग-रेको पीडित पक्षको आरोप छ।
बिभिन्न म्यूजिक भिडियोको सु’टिङका क्रममा तनहुँ गएका बेला अभिनेता शाहले फकाएर आफूमाथि क-रणी गरेको गायिकाको आरोप छ । उनले अभिनेता शाहले आफूलाई फ’काएर पटक पटक क -रणी ग-रेको दा’बी गर्दै आएकी छन् ।
यता पल शाह निकट श्रोतका अनुसार नायक पल शाहले आ-त्म-सपर्ण गर्ने बुझिएको छ । आफूमाथि ब-ला-त्कार ग-रेको उजुरी दर्ता भैसकेको र पक्राउ पुर्जी समेत जारी भइसकेको अबस्थामा अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न उनि आफै प्रहरीकोमा जाने श्रोतले बताएको छ ।
अब ४० वर्ष कटेका पुरुषलाई भत्ता।
वृद्ध भत्ता ५ हजार,कर्मचारी को तलब भत्ता यति धेरै बढाउनेदेखि दूरसञ्चार कर घटाउनेसम्म निर्णय।